Sincelinux wuxuu bilaabay shabakad microblog ah | Laga soo bilaabo Linux
Sincelinux wuxuu bilaabay shabakad microblog ah
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno helitaanka shabakad ka mid ah microblogging ku saleysan status.net in our domain Fromlinux.net.
Waa maxay ujeedka tan? Sababtoo ah ma heli karno Twitter iyo shabakado la mid ah, sidii aan u go'aansanay inaan abuurno midkeenna. Iyada oo loo marayo waxaan la wadaagi doonnaa akhristayaashayada noocyo kala duwan oo macluumaad ah, sidaa darteed waxaan ka dhigi doonnaa degelkeenna meel bulsho oo badan. Tani waxay na siisaa dhammaan faa'iidooyinka ay a microblog.
Hada diiwaangelintu ma ahan lacag la'aan maxaa yeelay waxaan sameyn doonaa tijaabooyin qaar, si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad kaqeybqaadato, waxaad nooga tagi kartaa emaylkaaga foomka xiriirka oo waxaan kuu soo diri doonaa casuumaad.
Waad nagala socon kartaa adoo maraya RSS wayna isticmaali karaan Turpial (wax laga beddelay), Kulul, choqok ama macaamiisha taageerada la siinayo Identi.ca/status.net. Wixii su'aal ah ama dhibaato ah, noo dhaaf faallo.
Guji si aad u hesho
Nota: Maqaarka ay shabakadda bulshadu isticmaasho waa midka sida caadiga ah ku yimaada, anigana waxaan sameeyay astaanta ay igu dhiirrigelisay tan Turubka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sincelinux wuxuu bilaabay shabakad microblog ah
Tanna waxaa sameeya kuwa dhaha inay si adag u yaqaanaan sida wax loo barto.
Haddii aan horeyba u ogaa taas tan inaad rabto inaad la tartanto MuyUbuntu, haddii aan horey u aqaan hahahaha
Hahaha muxuu hal shay ka qabtaa kan kale? Qofna halkan waxba kumuujirin 😛
Sababtoo ah ma heli karno Twitter iyo shabakadaha la midka ah, markaa waxaan go aansanay inaan sameysano kuweena
Nin yahow, taasi cilmi ma lahan. Qofkasta wuu dhisi karaa Status.net ..
Waa run doqon kastaaba wuu awoodaa.
Oops, ninkani muxuu yidhi ... waxaad ugu yeedhay KZKGGaara doqon
HAHAHAHAHA nah, nacas ma dhihin ... wuu fiicanyahay inuusan usheegin ¬¬ ... gggrrrr
Khalad, waxaan dooneynaa inaan nafteena u raaxeyno, wax intaas ka badanna ...
Iyo si aad tan u sii kordhiso, elav horeyba waa kuu sheegay, uma baahnid inaad wax barnaamij sameyso 😀
Dhab ahaan, marka lagu daro u adeegida Memorandum.
Hahahaha waxay ahayd odhaah, sidoo kale waxaan dhihi lahaa: doqon kasta oo rakibayaa Debian ama Archlinux. wanaagsan oo leh macne labalaab ah, laakiin bueee.
Beddelkaagu waa mid aad u wanaagsan ... way fiicnaan lahayd haddii bulshada GUTL ay ku soo biiraan mashruucan, miyaadan u malayn @elav?
Ku jawaab anubis
Dhibaatadu waxay tahay ma ogin in qof kastaa heli karo Fromlinux.
Waxaan u maleynayaa inaan casuumaad u dirayo Nelson, Pablo iyo qof kale oo xumaan lahaa 😉
Baro Barnaamijka Python: Cutubka 5aad
Waan jeclahay KDE, laakiin ...